आयुर्वेदले स्वाद र गुणका आधारमा खानालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ–सात्विक, तामसी र राजशी - Entertainment Khabar
आयुर्वेदले स्वाद र गुणका आधारमा खानालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ–सात्विक, तामसी र राजशी
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १२, २०७७ समय: ६:३३:४१
साउनमा सात्विक खानपान गर्नुपर्छ भनिन्छ । सात्विक, जो सहजै पच्छ, सन्तुलित, पोषणयुक्त र स्वादिलो पनि हुन्छ । सात्विक आहारमा सत्व गुण भरिपूर्ण हुन्छ । यस्तो खानाको सेवनले तन र मन शुद्ध हुने, शक्ति मिल्ने, सुन्दरता र प्रशन्नता मिल्ने बताइन्छ ।
आयुर्वेदले स्वाद र गुणका आधारमा खानालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ–सात्विक, तामसी र राजशी । अतः प्याज र लसुनलाई तामसिक एवं राजशी खानामा राखिएको छ । अतः सात्विक भोजनमा प्याज र लसुन निषेध गरिएको छ ।
प्याज र लसुनको आफ्नै औषधिय गुण भएपनि यसको सेवनले शरीरलाई उत्तेजित बनाउने, ताप बढाउने बताइन्छ ।
प्याज र लसुन दुबैमा पाइने गुण लगभग एकै हुन्छ । दुबैमा एलियम नामको तत्व रहेको हुन्छ । औषधिय गुण पनि हुन्छ । तैपनि यसलाई तामसिक खानाको श्रेणीमा राखिएको छ । तामसिक खानाले शरीरमा यौन उत्तेजना बढाउँछ । यसका साथै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि यसले असर पु¥याउने आयुर्वेदमा उल्लेख गरिएको छ ।
खासगरी सात्विक जीवनशैलीमा अभ्यस्तहरुले खानामा प्याज, लसुन सामेल गर्दैनन् । कतिपयले साउन महिनाभर मात्र पनि यी दुई कुरा खाँदैनन् ।
कतिपयले भने वर्षायाममा लसुन वा प्याजलाई खानामा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् । खासगरी संक्रमाक रोगहरुबाट बच्न लसुन वा प्याजको सेवन उपयोगी हुने बताइन्छ । यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । आयुर्वेद अनुसार प्याज र लसुन तामासिक एवं राजशी खानामा सामेल हुने भएपनि औषधि बनाउनका लागि यी दुबैको प्रयोग गरिन्छ । यसमा औषधिय गुण जस्तो कि, एन्टि ब्याक्टेरियल, एन्टि फंगल र एन्टिल भइरल गुण रहेको हुन्छ । मुटुको स्वस्थ्यका लागि वा रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नका लागि लसुन र प्याज उपयोगी मानिन्छ ।
किन सात्विक भोजन ?
हल्का र स्वस्थ भोजन नै सात्विक भोजन हो । यो न ज्यादा मीठो हुन्छ, न त ज्यादा नुनिलो पिरो नै हुन्छ । सात्विक भोजनले मनलाई शान्त गर्नुका साथै शरीरलाई शुद्ध गराउन समेत मद्दत गर्दछ । योगी र मुनिहरुले समेत सात्विक भोजनको सेवनलाई उपयुक्त मानेका छन् । स्वयं ऋषिमुनीहरु समेत सधैं सात्विक भोजन मात्रै गर्दथे । योगी आहार समेत भएकोले यो हाम्रो शरीरको लागि कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा पनि सहजै पत्तालगाउन सकिन्छ । जसरी तामसिक भोजनले आलस्य बढाउँछ भनिन्छ, त्यसरी नै राजसिक भोजन पचाउनकोलागि समस्या हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । तर, सात्विक भोजन पचाउनमा सहज, हल्का र ऊर्जावान हुने गर्दछ । सात्विक भोजनको उदाहरणको रुपमा ताजा फल, तरकारीहरु, हरियो तरकारी आदिलाई लिन सकिन्छ ।
कलाकारलाई फेसबुकमा अनावश्यक गाली आउन थाल्यो । दर्शकले कलाकारको व्यवहारमा टिप्पणी गर्न थाले । कलाकारले जे पनि बोलिदिएपछि ...
लधु चलचित्र अफसाइड सार्वजनिक
कोभिड १९ कोरोना भाइरसको कारण यति बेला विश्व भरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। नेपालमा पनि कोरोनाको प्रभावले सम्पूर्ण क्षेत्र...
कलाकारको तीज युट्युबमै
तिलोत्तमा — बटौली शब्द जोडेर धेरै तीजका गीत बनेका छन् । हरेक वर्ष मुलुकको मध्य भागमा रहेको बुटवल सहर तीजका नयाँ–नयाँ भाक...
टिकटकबाट चर्चासँगै आम्दानी, एउटा भिडिओ प्रायोजनमा कति कमाइन्छ ?
काठमाडौं। हिजोआज टिकटक निकै लोकप्रिय छ। म्यूजिक भिडिओदेखि स-साना भिडिओका लागि टिकटक धेरैको रोजाइमा परेको छ। यसमा अभिनय ग...
पाथिभरा माताको दर्शन गरी भेटी स्वरूप शेयर गर्दै, आज २०७७ साउन ३० गते शुक्रबार आजको राशिफल
‘आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल श्रावण ३० गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० अगस्त १४ तारीख भाद्र कृष्णपक्ष दशमी तिथी मृगशिरा न...
नेपाली मजदुर एकता समाज मलेशिया पुनर्गठन यस्तो छ नयाँ समिति
क्वालालम्पुर ( मलेसिया ):= देश तथा बिदेशमा रोजगारका लागी पुगेका श्रमिकहरुको हकहितका लागि र बिदेश विभिन्न कारणले अलपत्र प...